स्वास्थ्य पेजकपर टि ले यौन जीवनमा असर त पर्दैन ? - स्वास्थ्य पेज कपर टि ले यौन जीवनमा असर त पर्दैन ? - स्वास्थ्य पेज
कपर टि ले यौन जीवनमा असर त पर्दैन ?
अनिच्छित गर्भ रोक्नका लागि कपर टि राम्रो विकल्प हो । कपर टि पछिल्लो समयमा गर्भनिरोधकको सबैभन्दा राम्रो उपाय मानिन्छ । कपर टि लगाएपछि अनिच्छित गर्भ रहने भय हुँदैन । तर, कपर टि लगाइसकेपछि कति दम्पतीमा यस्तो प्रश्न उठ्न सक्छ कि, यसले यौन जीवनमा असर त पर्दैन ?
यौन सम्पर्कका क्रममा कपर टिमा लगाइएको कप्पर अर्थात तामाको तारले वा तल रहेको प्लास्टिको तारले यौन सम्पर्कमा वाधा उत्पन्न गर्न सक्छ भन्ने डर धेरैमा हुन सक्छ । खासमा कप्परको तार राम्ररी मिलाएको हुन्छ र त्यो पाठेघर भन्दा बाहिर आउदैन र तल रहेको प्लास्टिकको तार चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले मिलाएर काट्नुपर्ने हुन्छ । यो असाध्यै नरम हुन्छ, त्यसैले कुनै नराम्रो महशुष हुदैन । यद्यपी त्यसो भएमा चिकित्सककहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा उपलब्ध कपर टि मा हर्मोन प्रयोग गरिएको हुदैन । तर बाहिरी मुलुकमा केहि महिला, जसले हर्मोनल आईयूडी लगाएको हुन्छ, यौन सम्पर्कको क्रममा उनीहरुको रगत आउन सक्छ । हरेक महिना मासिक श्रावका साथै थोरै रगत आउन सक्छ । कहिले कहि यौन सम्पर्कको बेला पनि रगत आउन सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्थामा आएमा यौन जीवन प्रभावित हुनसक्छ । त्यसैले चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
यस किसिमको आईयूडी लगाएपछि अनप्लान्ड प्रग्नेन्सीको खतरा हुँदैन । यौनमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न सकिनेछ । जब चक्की लिने वा कन्डम लगाउने चिन्ता हुँदैन भने यौनसम्पर्क अधिक सहज हुन्छ ।
-यो सुविधाजनक हुन्छ, पिल्स लिनेजस्तो झन्झट हुँदैन ।
-महंगो हुँदैन ।
-चिकित्सकद्वारा कुनैपनि समयमा निकाल्न सकिन्छ ।
-तुरुन्तै काम सुरु गर्छ ।
कपर टी लगाए पछि कसैकसैलाई सेतो पानी जाने, तल्लो पेट दुख्ने हुन सक्छ । यस्तो भएमा चिकित्सकसंग सम्पर्क गर्नु पर्छ, सबै अवस्थामा कपर टी निकाल्नु पर्दैन । कहिलेकाही कपर टी खसेको हुन सक्छ ।
कपर टी खस्दा आत्तिनु पर्दैन । तर कपरटि नभए पछि परिवार नियोजन नहुने भएकोले अर्को साधन रोज्ने वा फेरि कपर टी लगाउनु पर्छ । कपर टी परिवार नियोजनका सबै क्लिनिकहरुमा आवश्यक परामर्श र परिक्षण गरेर लगाउने गरेको छ । अहिले स्त्रीरोग विशेषज्ञहरु आफैले पनि लगाईदिने गरेको छ । यो बच्चा जन्मिने बित्तिकै पनि लगाउन सकिन्छ । नेपाल सरकारका स्वस्थ्य संस्थामा यो सेवा निशुल्क छ भने निजि अस्पतालहरुमा कहि शुल्क लिने गरेको छ ।